Na-eto eto osisi junipa: nkwụ, nlekọta, ozuzu - Ornamental osisi na-eto eto - 2020
Na-akụ ma na-elekọta osisi junipa
Juniper na-aghọwanye osisi na-ewu ewu n'ubi, n'agbanyeghị eziokwu bụ na ọ bụ ebe obibi nke United States. Juniper dị oké ọnụ ahịa maka ọdịdị mma ya, ọgaranya na agba ogwu ma na-ejikarị mee ihe n'ogige nsị maka ihe ịchọ mma ọhụụ, akwa akwa na ụzọ.
Juniper - Nke a bụ coniferous evergreen. Na forums banyere osisi ha na-ajụkarị: ego ole juniper bi? N'okpuru ọnọdụ dị mma, shrub nwere ike ịdị ndụ ruo afọ 200, na otu esi akụ mkpụrụ osisi junipa, nakwa otú e kwesịrị isi lekọta ogologo imeju a, anyị ga-ekwu okwu n'isiokwu a.
Na-eto eto ma na-elekọta osisi junipa dị iche, atụmatụ nke akuku
Ntughari nke osisi junipa na ala
Esi họrọ otu ebe maka ọkụ na-eto eto
Otu esi akụ osisi junipa, usoro
Atụmatụ nke nchekwa osisi juniper
Esi na mmiri ma na-elekọta junipa
Juniper kehora: fatịlaịza na n'elu mgbakwasa
Atụmatụ nke osisi junipa, trimming
Mgbasa nke osisi junipa
Nguzogide nke osisi junipa jikọtara ọrịa na pests
Juniper kehora: nkọwa
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, na-anụ banyere osisi junipa, nwere nkọwa doro anya nke ụdị osisi ọ bụ. Ndị nnọchianya nke jupụtara na juniper nwere nkọwa na-esonụ: osisi shrub nke dị ala (elu ruo 20 cm), nwere nnukwu okpueze spacing, nke nwere ike iru 180 cm. Anụ ogologo ogologo - 3-5 mm. Agba bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ agba ntụ-acha akwụkwọ ndụ.
Ị ma? N'ihi na osisi junipa oyi na-agba ọchịchịrị ma nwee ike inweta ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
Okpokoro ifuru na May, na-amị mkpụrụ na June-July, mkpụrụ mbụ na-apụta n'afọ nke abụọ nke uto. Dark shishkoyagod na-acha odo odo (n'ụdị ụfọdụ nwere ike ịbụ nwa), nke dị 5-6 mm n'obosara. Mbelata nke ifuru ahụ bụ na osisi junipa na-eto nwayọọ nwayọọ ma na-etolite 10 cm karịa afọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-azụ atụrụ apụtawo ọtụtụ ụdị osisi junipa dị iche iche, bụ ndị dị n'ime ya bụ ụdị dị iche iche nke ruru 10 cm, na ụdị dị ogologo - ruo 50 cm.
Osisi na-adịghị achọpụta ụzọ aghụghọ pụrụ iche mgbe ị na-akụ ma na-elekọta, Otú ọ dị, ụfọdụ ụzọ aghụghọ dị mkpa ka ị mara. Banyere etu na ebe ị ga-akụ mkpụrụ osisi junipa, nke mere na ọ na-atọ gị ụtọ na ọ ga-eme ya, anyị ga-ekwu okwu n'ihu.
Maka uto nke osisi junipa, ọ ka mma ịhọrọ ala mmiri ma ọ bụ ájá ájá nke zuru oke na ihe nro. Mgbochi kwesịrị ịdị ọcha, na mmiri dị mma, n'ihi na n'ime ala dị ụrọ nke mmiri na-agbanye, osisi junipa agaghị eto.
Nhọrọ kachasị mma maka ala mix ga-abụ ndị na-esonụ: 2 mbak humus kwesịrị agwakọta ya na 2 akụkụ nke sod n'ala, tinye 2 mbak peat na 1 akụkụ nke ájá.
Ọ dị mkpa! Osisi juputara n'azụ abụghị nanị "na-amịkọrọ" ihe ndị bara uru sitere na ala, kamakwa na-eme dị ka "dọkịta" nke ala, na-egbochi mmetọ ala.
Tupu ị malite ịmalite osisi, ị ga-achọ ịma ebe juniper ga-etolite. Kasị mma maka osisi dị mma, ebe dị mma. N'agbanyeghị na osisi junipa na-anabata mgbanwe mberede na okpomọkụ, ọ ka mma ịhọrọ ebe echedoro site na ifufe.
Ịgha mkpụrụ osisi junipa, dị ka usoro dum nke ịkụ mkpụrụ, abụghị ihe mgbagwoju anya. Atụmatụ ọdịda dị mfe, mana ihe nile aghaghị ime nke nta nke nta ma jiri nlezianya mee ya:
olulu kwesịrị ibu karịa mkpụrụ osisi ahụ, okpukpu abụọ, na dayameta ya ga-agafe na dayameta nke mgbọrọgwụ ya na clod earthy ugboro 2.5;
ọ dị mkpa (!) ịtọ akwa oyi akwa na ala olulu;
tupu ịgha mkpụrụ na ala, ọ ghaghị disinfected na ngwọta nke potassium permanganate;
mgbe olulu dị ọkara jupụtara na ala, ọ dị mkpa ịwụnye ịwụ mmiri n'ime ya ma kụọ mkpụrụ osisi;
osisi na olulu mkpa ka a kpoo ya na ogwu;
ebe dị n'etiti ndị okenye ga-adịkarịa ala mita 1.5;
ọhụrụ kụrụ seedlings kwesịrị mulched na sawdust ma ọ bụ nwa ehi (oyi akwa 5-8 cm).
Ị ma? Iji mee ka osisi junipa dị mma gbanyere mgbọrọgwụ, ị nwere ike itinye rotor na mmiri maka ogbugba mmiri n'ubi.
Juniper - osisi na-adịghị mma, ọ bụghị nanị na ịhọrọ ala, kamakwa na nlekọta. N'ihi na osisi jupụtara na-adị jụụ chọrọ ịgbara mmiri, oge dị mma, yana kwachaa.
Juniper na-egbochi oge ọkọchị na-adịru nwa oge ma na-achọ ihe ọzọ ịgbara naanị na oge okpomọkụ. Iji mee ka iru mmiri dị mma, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị na ị ga-agba mmiri shrub ahụ, kamakwa ịkwanye osisi ahụ. Ọbụna n'oge kachasị mma, osisi junipa ga-enwe obi ụtọ na ya na-egbuke egbuke agba. Mmiri osisi ahụ ka mma mmiri dị nro. Tinyere ogbugba mmiri, ọ dị mkpa ịtọghe ala, nke ga-enyere mgbọrọgwụ aka iji nri oxygen.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na osisi junipa ahụ na-etolite na ebe mmiri mmiri dị n'akụkụ usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ, a ghaghị iji nlezianya na nke ọma mee nke ọma, n'ihi na osisi junipa adịghị anabata mmiri dị ọcha.
Juniper adịghị mkpa ugboro ugboro na ike nri. N'oge opupu ihe ubi na ala mee nitroammofosku na ọnụego 30-40 g kwa square mita. Mgbe ị na-akụ n'ala dị ka fatịlaịza, ị nwere ike itinye peat ma ọ bụ paini nut shell. Nhọrọ ọzọ na nitroammofoski nwere ike ịbụ fatịlaịza dị mgbagwoju maka conifers. Ọ dị mkpa iji fatịlaịza dị otú ahụ jiri nlezianya jiri nlezianya mee ntuziaka ahụ. N'ime oge akọrọ, oge jupụtara na junipa nwere ike iji nri nitrogen.
Ị ma? Ọ gaghị ekwe omume iji ehi ma ọ bụ nnụnụ humus, ngwaahịa ndị dị otú ahụ bụ ndị na-egbu egbu ma nwee ike "ọkụ" usoro mgbọrọgwụ nke osisi.
Tupu ị belata osisi junipa ahụ, ị ​​ghaghị nlezianya nyochaa ya maka Ome ndị mebiri emebi. A na-emechasịchaa oge izu na ọ ga-adị nnọọ ike. N'ebe ọ bụla a na-egbutu osisi, ọ bụ naanị alaka ndị na-acha ọkụ na ndị na-arụ ọrụ na-ewepụ ya, ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka okpueze sie ike, a ga-ewepụ ya ma ọ bụrụ na ọ na-arịa ọrịa.
Enwere ike ịgbasa Juniper n'ụzọ abụọ: mkpụrụ na vegetative (grafting). Tụlee ụzọ abụọ a n'ụzọ zuru ezu.
A na-egbutu "ikiri ụkwụ" na mmalite oge opupu ihe ubi na igwe ojii. N'ime osisi toro eto, ọ dị mkpa iji belata mkpirikpi 12 cm n'ogologo, nke mere na 2-3 cm nke nchara na-anọgide na ya. Ọ dị mkpa iji wepu nsị ọ bụla site na ịcha ma tinye ha na fatịlaịza mmiri maka otu ụbọchị ka ha nwee ike ịmalite mgbọrọgwụ ngwa ngwa. Mgbe ahụ, a na-akụ mkpụrụ osisi ahụ n'ime ite, na-emikpu ha site na 3 cm, na ngwakọta nke ájá na peat na nha nke 1: 1. A ghaghị ịṅụ mmiri ma kpochaa ya. Ọ dị mkpa iji osisi junipa a kụrụ n'ubi na-adịghị ala karịa 22 Celsius, wepụ ihe nkiri ahụ site n'ite ahụ kwa awa 5.
A ghaghị idebe ala mgbe niile. Mgbọrọgwụ mbụ ga-apụta na otu ọnwa na ọkara, ọ ga-ekwe omume ịkwaghasị osisi n'ime ite dị n'ime ọnwa abụọ, na n'ime afọ 2-3 iji kụọ ha na ebe na-adịgide adịgide.
Mgbasa mkpụrụ na-agụnye ọ bụghị nanị ịgha mkpụrụ, kamakwa ha na-agbanye mkpọrọgwụ.
Ọ dị mkpa! E nwere ike ghara ịmị mkpụrụ osisi junipa ụfọdụ, ha na-akpọkarị F1.
Ị nwere ike ịgha mkpụrụ ọ bụghị nanị zụrụ mkpụrụ, mana ị na-anakọta kwa osisi ha. Usoro nchikota a bu ihe a: tinye akwa n'ime igbe, gbasaa osisi n'elu ma kpuchie ha na otu onodu. Hapụ igbe n'èzí maka oyi niile na ọnwa mbụ nke oge opupu ihe ubi. Na May, ị nwere ike ịmalite ịgha mkpụrụ. Tupu usoro ịgha mkpụrụ, ọ dị mkpa ka ịgha mkpụrụ ahụ na ngwọta nke potassium permanganate (3%) maka nkeji iri atọ, jidere awa 2 na mmiri fatịlaịza mmiri ma gbasaa n'ebe a kwadebere dịka atụmatụ 50 × 80.
Na forums, ị nwere ike ịhụ nyocha na juniper na-acha edo edo, na-akpọnwụ akpọnwụ, fungal growths na-apụta n'osisi ahụ, na-amalite ndị ọrụ ubi anaghị ama ihe ha ga-eme n'ọnọdụ ndị dị otú a. Ihe ịrịba ama ndị a bụ ihe mgbaàmà nke ọrịa ndị dịka fusarium (n'ihi mmiri mmiri), nchara (nnu nnu dị elu na ala gburugburu ohia), ụdị ọrịa schütte (nke na-etinye ncha).
Ọrịa ndị a nile na-eme n'ihi nlezianya na-elekọta osisi ahụ. Iguzogide ọrịa, ọ dị mkpa ịgwọ shrub na fungicides na Bordeaux liquids. Dịka mgbochi mgbochi, ọ dị mkpa iji iwepụ ihe niile dabara adaba n'okpuru ohia ahụ, nakwa iji nlezianya dozie.
Site na umu osisi juniper nwere ike ibuso aphid, scytwick na ududo. Nchịkwa nke pests ndị a dị mfe: enwere ike ịnakọta ha (ọ dị mkpa iji aka rụọ ọrụ), bibie ndanda (ha bụ "ndị mbụ" nke aphids), na-emeso shrub na ụmụ ahụhụ na mmiri ncha.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ naghị esiri m ike ịkụlite osisi junipa na mpaghara m. Naanị ị ga-enwe ndidi ma gbalịsie ike, na ụlọ gị ga-abụ ihe mmemme dị mma dị mma.